Macnaha dahaarada | Tixraaca Fudud Ee Muslimka
Bogga hore/Qeybaha/Dahaaro qaadashada Muslimka/Macnaha dahaarada
Asalka macnaha dahaarada waa hufnaanshaha, nadaafadda, iyo xalidda.
Allaah Kor ahaaye wuxuu amray Muslimka inuu daahiriyo oogadiisa iyo uurkiisaba, waa inuu ka daahiriyo oogadiisa waxyaalaha xaaraanta ah ee muuqda iyo xumaha iyo wasakhaha, oo ku daahiriyo uurkiisa inuu ka xalo qalbigiisa shirkiga iyo cudurrada gala qalbiga sida xasadka iyo kibirka iyo xumaan tirsiga, marka uu sidaas falana wuxuu mutaa maxabbada Ilaahay, sida uu Allaah Kor ahaaye yiri:
(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين) (البقرة: 222 ).
“Hubaal Allaah wuxuu jecel yahay kuwa in badan u soo noqda, oo wuxuu jecel yahay kuwa isdaahiriya”. (Al-Baqarah: 222)
Allaah wuxuu amray in la isu daahiriyo salaadda, waayo waa la kulan iyo la faq Allaah Subxaanahu, waxaana la ogsoon yahay in qofku is nadiifiyo oo xirto dharkiisa kan u qurxoon marka uu la kulmayo boqor ama madaxweyne, ee bal ka warran qof la kulmaya boqorka boqorrada Subxaanahu watacaalaa.
Waa maxay dahaarada la doonayo in la isugu diyaariyo salaadda?
Allaah Wuxuu amray Muslimka inuu la yimaado dahaarada sharciga ah, si kale haddaan u fasirno waa arrin waajib ah hadduu qofka Muslimka doonayo inuu tukado salaadda ama taabashada musxafka ama ku dawaafka Kacbada la sharfay, wuxuuna dhiirrageliyey ajar badsi darteed weesada meelo kale oo badan, waxaa ka mid ah: marka aad akhriyeyso Qur’aanka taabasho la’aan musxafka, iyo marka aad duceysaneyso, iyo waqtiga seexashada, iwm.
Marka waxaa saaran qofka Muslimka hadduu doono inuu tukado salaadda inuu iska daahiriyo labo arrimood:
Waxyaalaha buriya dahaarada
Najaasadu waa waxyaalo muuqda uu sharcigu ku xukumay inay qurun yihiin oo na amray inaan iska daahirinno si aan u gudanno cibaadada.
Asal ahaan wax walba way bannaan yihiin oo waa daahir, najaasadase waa wax soo kordha oo dhaca, marka haddaan ka shakinno daahir ahaanta marada tusaale ahaan, oo aan hubin inay ku taal najaaso iyo in kale, markaa asalka waa inay maradu daahir tahay.
Oo haddaan doonno inaan tukanno waxaa nagu waajib ah inaynu iska daahirinno najaasooyinka ku yaal oogada iyo dharka iyo meesha aan ku tukaneyno.
Waxyaalaha najaasada ah waxaa weeye:
1 Kaadida dadka iyo saxaradiisa.
2 Dhiigga, waase cafis dhiig qaddar ahaan yar.
3 Kaadida iyo digada xoolaha aan hilibkoodu la cunin (Eeg bogga 236).
4 Eyga iyo doofaarka.
5 Xoolaha baqtiyey ( Waxaana loola jeedaa dhammaan xoolaha baqtiyey marka laga reebo xoolaha bannaan in la cuno haddii loo gowraco si sharciga waafaqsan, eeg Bogga) meydka aadmiguse iyo kalluunka iyo cayayaanka, waa daahir.
Iska daahirinta najaasada
Waxaa ku filan xagga ka meyridda najaasooyinka oogada ama marada ama meesha lagu tukanayo ama qeyrkeed – in la waayo oo la tiro raadka najaasada oo dhab ahaan uga tiranto meesha najaasowday, si kasta oo lagu daahiriyo ha la isticmaalo biyo ama wax kale oo qeyrki ah, waayo Xeer dejiyaha wuxuu amray in la meesha lag tiritro najaasada mana uusan shardin xagga meyridda najaasada tiro go’an marka lag reebo najaasada eyga (waana dhareerkiisa iyo kaadadiisa iyo saxaradiisa), wuxuu sharad ka dhigay in la meyro toddobo meyrid oo midda koowaad tahay in lagu xalo ciid, halka najaasooyinka kale, ay ku filan tahay in araggeeda la waayo iyo dhabteeda, dhibna ma leh haritaanka midabka ama urka, sida uu Nabigu  ku yiri mid ka mid ah saxaabooyinka xagga meyridda dhiigga caadada: “Waxaa kugu filan meyridda dhiigga, dhibna ma leh raadkeeda ku hara” (Abuu Daawuud 365)